Wadashaqeyn ballaaran oo lala yeesho Spaces Moxie | Blog MarTech
Meelaha Moxie: Iswaafaji Suuqgeynta iyo Adeegga Macaamiisha
Monday, June 25, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Dunida maanta tartamaysa ee sii kordheysa waxay u baahan tahay go'aanno deg deg ah iyo xitaa fulin deg deg ah, tanina shaki la’aan waxay u baahan tahay wada shaqeyn adag Meelaha Moxie rajeynayaa inay u fidiso suuqleyda qalab cusub oo isku waafajinaya suuqgeynta, adeegga macaamiisha iyo taageerada shirkadda dhexdeeda. Isu waafajinta dhammaan, helitaanka, haynta, iyo fursadaha kor u qaadista ayaa si fiican la isugu duwi karaa, loo fulin karaa loona cabbiri karaa.
Meelaha Moxie ayaa ugu habboon ururada waaweyn. Shirkaddu waa inay marka hore aasaastaa kooxo iyo goobo, oo ay siisaa qalab sida durdurrada dhaqdhaqaaqa, baloogyada, kalandarrada, shirarka doodaha, warbaahinta, mashaariicda, wikis iyo wax kasta oo kale oo looga baahan yahay socodka iyo habsami u socodka shaqada.
Meelaha Moxie ™ waxay leedahay waxyaalahan soo socda ee suuq-geynta (waxaa lagu taxay tiradooda bogga wax soo saarka):
A qalab buuxa si aad ula xiriirto macaamiishaada meelkasta oo ay joogaan, iyada oo loo marayo iskaashiga iskaashiga ah, aqoonta aasaasiga ah, emaylka, wada sheekaysiga, bulshada, warbaahinta bulshada, cobrowse, guji si aad u wacdo, iyo taleefan Spaces oo ay u dirto Moxie ™.
Helitaanka waxa ku jira, xogta, wada-hawlgalayaasha, iyo khabiiro si go'aanno fiican oo dhaqso leh loola gaaro fikradaha waqtiga dhabta ah.
Qalab firfircoon si loo yareeyo ka tagida websaydhka, u macaamilka macaamiisha, iyo wado dakhli dheeraad ah oo internetka ah.
Waxqabadka si qaybi fariimaha mideysan, baahinta cusbooneysiinta muhiimka ah, iyo kordhinta daahfurnaanta iyo jawaab celinta barnaamijyada suuqgeynta.
Qalabka si guul leh loo fuliyo iibinta iyo iibinta iskutallaabta iyo helitaanka xogta macaamiisha muhiimka ah.
Isticmaalayaasha waxay ku soo galeen nidaamka si ay u helaan qalabka iyo ilaha la xiriira arrinta ay ka shaqeeyaan. Waxay sidoo kale ku xirmaan khabiirka ku habboon ee leh xalka ama jawaabta dhibaatada gaarka ah ee soo wajahda ama cadeynta gaarka ah ee ay u baahan yihiin. Waqtiga iyo dadaalka la badbaadiyay raadinta macluumaadka saxda ah ama qofka, ama ka gudubida meeraha kala duwan ee emaylka, wada sheekaysiga ama wadashaqeynta qaabab kale, waxay leedahay kor u kac toos ah oo ku saabsan wax soo saarka iyo waxtarka. Adoo ku xoojinaya adeegsadaha kheyraad fara badan iyo fursado, waxay sidoo kale shidaysaa hal-abuurnimada.
Dhawaan, Moxie wuxuu wanaajiyay shaqeynta Boosaska xitaa intaa ka sii dheer isagoo ku daray Meelaha Emailka iyo Goobaha Wadahadalka. Labadaba shaqooyinkani waxay kor uqaadaan taageerada macaamiisha si weyn iyagoo wanaajinaya xawaaraha iyo tayada jawaabta labadaba. Waxay sidoo kale hagaajineysaa waxtarka howlaha gudaha.
Meelaha Emailka ayaa iswada isgaarsiinta emaylka waxayna kordhisaa muuqaalka isgaarsiinta oo dhan guddiga. Meelaha lagu sheekeysto, oo ah waqti wada shaqeyn wada sheekeysi dhab ah, wakiilo awood u siinaya inay si toos ah ugu keenaan khabiirada mawduucyada kulanka macaamiisha.
Tags: wac xaruntachannelsisgaarsiintaAdeegga macaamiishaemailmoxiewarbaahinta bulshada
Miyaad Ka Fikireysaa Suuqgeynta Ebook-yada?
Baraha Bulshada Sida loo Xidho